Namoota biyya alaa 300 kanneen namticha jabaa Libiyaa jedhamu Kaliifaa Haaftar cina dhaabachuun waraanaa turan Libiyaa gadhiisuuf kan jiran ta’u namnii kun beeksisee jira. Kunis walgahii waa’ee Libiyaa irratti dubbatu kan keessumeessituu Faransaayii biraa gaaffii dhiyaateen ta’uun ibsameera.
Yoom akka ba’an kan lafa hin keenyee labsiin kun, jala bultii walgahii sadarkaa addunyaa paariis keessatti gaggeeffamutti oduun kun dhaga’ame.
Konfraansiin kun Libiyaan baatii muddee dhufu filannoo akka gaggeesitu karoora ba’e akka hojii irra oluu mirkaneessuu akkasumas Libiyaa keessatti tasgabii buusuu irratti qiyyaafate.
Tokkummaan mootummootaa akka tilmaamuutti namoota biyya biraa irraa bitaman akkasumas looltoota biyya alaa kan dhaabata eegumsa nageenyaa dhunfaa kan akka Raashiyaa akkasumas Chaad, Sudaan fi Siriyaa keessaa kan dhufan dabalatee kuma 20tu Libiyaa keessa jira.
Libiyaa keessatti abbaa irrummaa waraanaa ijaaruu barbaada jedhamuun kan qeeqmuu Haaftar, Tokkummaa biyyoota Emeereetootaa, Masrii, Raashiyaa fi Faransaayii biraa deggersa qaba.
Gama kaaniinTarkiin immo, bulchiinsa Tripolii keessaa kan deggersa addunyaa qabuuf gargaarsa meeshaa waraanaa kenniti.
Hojii jarreen kana Libiyaa keessaa baasuu kana qaama Tokkummaa Mootummootaa Libiyaa keessa jiruu fi biyyoota looltonni kun irraa dhufaniitu qindeessa jedhameera.
Lamummaa biyya kami akka qaban garu hin ibsamiin jira.prezidaantiin Faransaayii Imaanuu’eel Maakroon looltonni biyya alaa Libiyaa keessa jiran guutuummaatti akka ba’an gochuuf walgahiin kun akka raggaasisuu fedhu.